Ingiriiska oo Ciidan usoo diraya Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Ingiriiska oo Ciidan usoo diraya Soomaaliya
Saraakiil militeriga Ingiriiska katirsan ayaa ku sugan Soomaaliya, iyagoo qiimeynaya xaaladda kahor inta Ciidanka lasoo wado aan imaan, kuwaasoo la filayo sanadkan cusub ee 2022.
LONDON - Boqolaal askari oo British ah ayaa loo diyaarinayaa in loo soo diro Soomaaliya bilo gudahood si ay gacan uga geystaan ​​la dagaalanka kooxaha argagixisada ee sii xoogeysanaya.
Askarta UK oo kuwa lugta ah ayaa kordhin doona howlgalka tababarka Ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab iyo kooxda ku xiran Ururka Daacish.
Arintan waxay ku soo beegantay dilkii Xildhibaan David Amess, kaas oo mindi lagu dilay 15-kii bishan weerar argagixiso xili uu la kulmay dadka degan deegaankiisa laga soo doorto, waxaana loo xiray falkan wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Xali Xarbi Cali, oo 25 jir ah.
Ilo wareedyo ayaa wargeyska Mirror u sheegay in Ciidamada loo dirayo Soomaaliya uu ahaa qorshe laga doodayay ka hor dilka Xildhibaan David Amess, oo dilkiisa gilgilay dalka Ingiriiska.
Tiro yar oo Ciidamo UK ka socda ayaa Soomaaliya ku sugnaa mudo dhowr sano, kuwaas oo tababar ku siiya saldhiga ku yaalla Baydhabo askar kamid ah qeybta 60-aad ee xoogga dalka.
Daily Mirror ayaa fahansan in Ciidamada lugta ee ka socda Ingiriiska oo aad loo tababaray laga yaabo in ay Danab kala taliyaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish.
Danab waxaa horey gacanta ugu hayay Mareykanka, oo tababar siiyay, mana la oga doorka Mareykanka wuxuu ahaan doono, maadaama Ciidankii la saarey Jan 2021 dib loo soo celinayo.
Dalalka reer Galbeedka ayaa arkay khatar inay kasoo food-leedahay Soomaaliya kadib markii dhawaan Al-Shabaab kordhisay weerarada gobolka Geeska Afrika, kuwa qeybta ka ah AMISOM.
Kooxdan ayaa sidoo kale sannadkii 2010-kii weerarro ka geystay magaalada Kampala ee dalka Uganda, halkaasoo ay ku dishay 74-qof, iyadoo sannadkii 2013-kii ay weerar ku qaadey xarun ganacsi oo ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya [Westgate Mall] , halkaasoo ay ku dishay 67-qof.
Maalmo kahor, labo qarax ayaa ka dhacay Kampala, oo midkooda Daacish sheegatay, halka kii ugu dambeeyay dowladda farta ku fiiqday Al-Shabaab, oo Soomaaliya ka dagaalanta.
Comments Topics: al-shabaab ingiriiska soomaaliya